Lix (6) Arrimood oo Ciidanka Al-Shabaab Uga Soocan Yihiin Ciidamada Dowladda.(MAQAAL) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Lix (6) Arrimood oo Ciidanka Al-Shabaab Uga Soocan Yihiin Ciidamada Dowladda.(MAQAAL)
Last updated Apr 21, 2020 9,005 2
Sheekh Abuu Cubeyda-amiirka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shaabaab- oo sagootinaya raggii weeraray Bellidoogle
Wargeyska Foreign Policy ayaa isna 2018 qoray maqaal uu cinwaan uga dhigay “Somalia Is a Country Without an Army” oo micnaheedu yahay “Soomaaliya waa wadan aan ciidan lahayn” kaas oo uu ku faaqiday taagdarada iyo tayo xumada heysata ciidanka qaranka Soomaliya, wuxuuna soo xiganayaa khubaro iyo diblumaasiyiin reergalbeed ah oo sheegaya in ciidanka iyo saraakiisha dowladu yihiin kuwa aan anshax lahayn, gaboodfal badan, astaana u ah musuqa iyo qabyaaladda.
Aragtidan ayaa ah mid ay qabaan shisheeyaha daraaseeya siyaasada Soomaaliya, balse su’aashu waxay tahay maxaa ciidanka Al-Shabaab ka dhigay cudud military oo walwal ku abuurta cadowgooda gudaha iyo midka dibadda? Maxaase sababay in dowladaha reergalbeedka ah ay quus ka muujiyaan waxtarka ciidanka xooga dalka Soomaaliya, taliskiisana ku eedeeyaan inuu ragaadiyey musuqmaasuq, dishibilaan xumo, iyo qabyaalad?
Shabaab waxay ciidankoodu ku tababaraan caqiido ay gundhig u tahay waxa ay culimada Islaamku u yaqaanaan “Al-Walaa wal Baraa” taas oo kooxda u suuragelisay inay dhisaan ciidan ay aaminsan yihiin inuu ku dayanayo saxaabadii nabiga NNKH. Kooxda waxaa safkeeda kusoo biiri kara qofkasta oo Muslim ah, colna la ah dhammaan dowladaha aan Muslimiinta ahayn.
Dalka Soomaaliya waxaa ku sugan dowlado iyo ururo caalami ah sida Mareykanka, Ingiriiska, UN, NATO, iyo midowga Africa (AU) kuwaas oo dhamaantood garabsiiya dowlada Federalka, waxey ku guuldareysteen inay ciidan tayo leh u dhisaan Soomaaliya, halka Xarakada Al-Shabaab oo ah koox go’doonsan, dunidana aan aqoonsi caalami ah ka heysan, dagaallona ku furan yihiin ay ku guuleysatay inay dhisto cudud ciidan oo aan la dhayalsan karin una babacdhigtay dhammaan weeraradii kaga imanayey Mareykanka iyo AMISOM.
Saraakiil hore oo ka tirsanaa nidaamkii Siyaad Barre iyo falanqeeyayaal military oo aan la sheekeystay ayaa ka simanaa iney is weydiinayeen Su’aasha ah: waa ayyo ciidanka difaaci kara mustaqbalka dalka iyo dadka Soomaaliyeed, soona celin kara sharaftii uu wadanku lahaa.
Sanadihii lasoo dhaafay waddooyinka isku xira Muqdisho iyo Baydhabo, Muqdisho iyo Marka waxaa caadi ka noqday dhaca, boobka iyo kufsiga ay geysanayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, waxaa arrintan xaqiijiyey mas’uuliyiin ka tirsan dowlada iyo xildhibaanada golaha shacabka.
“Askariga police-ka ah ee Al-Shabaab waxaad arkeysaa isagoo ku milan bulshada, shacabkana ka heysta kalsooni ay kula mucaamilaan, halka askariga dowlada aad arkeyso isagoo takooran, bulshaduna ay ka dideyso” sidaas waxaa igu yiri ganacsade ka shaqeysta dhoofinta mooska.
Cawil Aadan waa darawal ka shaqeeya inta u dhaxeysa muqdisho iyo baydhab wuxuu ii sheegay in walwalka ugu badan uu soo wajaho marka ay soo gaaraan koontaroolada ay ka taliyaan ciidanka dowlada. “markaad aragtid ciidanka dowlada waxaa kugu beermaya walwal iyo walaac, waxaa dhaqan u ah kufsi, boob, baad iyo naxariisdaro” ayuu ii raaciyay.
Waa ciidan hadafkiisu u cad yahay, nidaam iyo kala dambeyn leh, dano shakhsi iyo mid qabiil ka ilaaliyey safkooda. Soomaaliya oo ah dal uu ragaadiyey dagaal sokeeye lagama soo helayo cudud military oo qaabkan u dhisan, ka bad-baaday qabyaalada, ciidana ka heshay dhamaan qabaa’illada Soomaaliyeed.
Arrimaha ay la gaarka yihiin ciidanka Al-Shabaab waxaa kamid ah: in ay leeyihiin koox lagu magacaabo “Guutada Istish-haadiyiinta” waa ciidan sooma jeestayaal ah oo fuliya howlgalada gaarka ah, kuwaas oo beegsada goobaha aadka loo ilaaliyo ee aan la geli karin, howshoodu waa inay khasaare lixaadleh gaarsiiyaan cadowgooda, iyagana la dilo, si ay u gaaraan yoolka ah Shahaado. Shahaada ayaa ah ererybixin loo yaqaan qofka lagu dilo dagaalka u dhaxeeya muslimiinta iyo gaalada, waxayna culimadu inoo sheegeen iney tahay darajo sare oo Rabbi siinayo qofkii gaalada isagoo la diriraya la dilo. Al-Shabaab waxay aaminsan yihiin in dagaalka Soomaaliya uu yahay mid u dhexeeya gaallo iyo muslimiin.
Mar aan meel kuwada shaaheynay mid kamid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed, oo lagu tiriyo inuu ka mid yahay dadka aadka uga soo horjeeda ururka iyo afkaartiisa ayaa ii sheegay iney aad u sahlan tahay in laga adkaado Al-Shabaab hadey ka tanaazulaan hal qodob oo ah isku xukunka kitaabka quraanka, wuxuu ii raaciyey “culimada soomaaliyeed ee ina taageera waxaa aad ugu adkaaday iney helaan jawaab lagu bushin karo isku xukunka shareecada”.
MUSAAB says 1 year ago
Nasrudiin_Islaami says 1 year ago
Qodobooyinka qaarkood caadi ma’ahan waa mid icajab gelisay xaqiiqda ayaa taabateen dawlada farmaajo hadii ay sidaasi iyo si’ka wanaagsa ku dhaqanto waa hubaal iney guuleysan doonto